Items 1 to 16 of 522 total
Rectangular Meeting Table အစည်းအဝေး စာပွဲ
148000 ~ 148000 Kyats
ရုံးသုံး ၊ လုပ်ငန်းသုံးပရိဘောဂပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် ရုံးခန်းနှင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး စားပွဲနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။အရည်သွေးမြင့်မားသော အစည်းဝေးသုံးစားပွဲများ၊ ရုံးခန်းသုံးစားပွဲအမျိုးမျိုးကို တစ်နေရာတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Favourite Office Furniture ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။ Online မှ ဝယ်ယူလိုသော Customer များအတွက် BaganMart.com website နှင့် baganmart.com/facebook မှဝယ်ယူရရှိပါသည်။
Luxury Sofa 8
9000 ~ 11000 $
Luxury Sofa 8 Sofa 3+1+1+1+1+ Middle Table =6pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/
ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပီး သစ်စေးသုတ်ထားသည့် အခန်း ကာ ပစ္စည်း ( Divider )
Augustine’s Antiques ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာရိုးရာ လက်မှု့ ပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ ဟိုတယ်၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ ( Reception ) ဧည့်ကြိုကောင်တာ များတွင် လာဘ်ကောင်ပစ္စည်းများ အဖြစ် လည်းကောင်း အဆောင်ပစ္စည်းများ အဖြစ်လည်းကောင်း အလှဆင် ပရိဘော ပစ္စည်းများအဖြစ်လည်းကောင်း ဝယ် ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဒါပြင် ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပီး သစ်စေးသုတ်ထားသည့် အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ ဟိုတည်သုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အကန့် ကာ(Divider)လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ရောင်း ချလျက်ရှိ ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီး မင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း အကန့် ကာ ( Divider ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Augustine’s Antiques ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Writing Table with Hanging Pedestal စာရေးစာပွဲ
Favourite Office Furniture ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ ရုံုးခန်း၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်ုးများ တွင်အသုံးပြုသော စားပွဲများကိုတင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းစားပွဲများ သည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော သစ်သားအထပ်သားများကိုသာအသုံးပြုသောကြောင့် သုံးစွဲရလွယ်ကူပါသည်။ဒါ့အပြင်၎င်းစားပွဲ၏အောက်တွင် ပစ္စည်းထည့်ရန် ဗီဒိုအကန့်သုံးခုပါ ရှိသောကြောင့်လိုအပ်သောပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်ဒီဇိုင်းဆန်သော စားပွဲ(Standard Desk) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Favourite Office Furniture ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။ Online မှ ဝယ်ယူလိုသော Customer များအတွက် BaganMart.com website နှင့် baganmart.com/facebook မှဝယ်ယူရရှိပါသည်။
Luxury Sofa 9
8500 ~ 11000 $
Luxury Sofa9Sofa 3+1+1+1+1+ Middle Table =6pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/
Credenza Cabinet TV တင်ခုံ
135000 ~ 135000 Kyats
ပစ္စည်းများတင်ရန် အံဆွဲအပြင် အကန့်များလည်း ထည့်သွင်းပြုလုပ်ပေးထားသော အလျား 1200mm အနံ 400 mm နှင့် အမြင့် 750 mm ရှိပြီး ရှင်းလင်းသေသပ်သော ဒီဇိုင်းကြောင့် ဧည့်ခန်းအလှဆင်ရာတွင် အသုံးတည့်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Favourite ကုမ္ပဏီမှ အံဆွဲ၊ စာသင်ခုံစားပွဲများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုလည်းလူကြီးမင်း တို့ စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ဒါ့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ ရုံးခန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော စာအုပ်စဉ်များကိုလည်း Favourite ကုမ္ပဏီတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီလုပ် ငန်းသုံး၊ ရုံးသုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူလိုပါက Favourite Office Furniture ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။ Online မှ ဝယ်ယူလိုသော Customer များအတွက် BaganMart.com website နှင့် baganmart.com/facebook မှဝယ်ယူရရှိပါသည်။
Luxury Sofa 10
8000 ~ 10000 $
Luxury Sofa 10 Sofa 3+1+1+1+1+ Middle Table =6pieces Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်အိမ်သုံး၊ ဟိုတယ်သုံး၊ ရုံးသုံး ရေချိုးခန်းသုံး အလှကြည့်မှန်များကို Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း သုံးသောင်း ကိုးထောင် ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Luxury Bedroom 1
12700 ~ 20000 $
Luxury Bedroom 1 Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
သေသပ် လှပသော သစ်စေး သုတ်ထားသည့် ကျွန်းဘောင် များ ( Lacquer Mirror Frames )
Augustine’s Antiques ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာရိုးရာ လက်မှု့ ပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ ဟိုတယ်၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ ( Reception ) ဧည့်ကြိုကောင်တာ များတွင် လာဘ်ကောင်ပစ္စည်းများ အဖြစ် လည်းကောင်း အဆောင်ပစ္စည်းများ အဖြစ်လည်းကောင်း အလှဆင် ပရိဘော ပစ္စည်းများအဖြစ်လည်းကောင်း ဝယ် ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပီး သစ်စေးသုတ်ထားသည့် အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ ဟိုတည်သုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကျွန်းဘောင် ( Lacquer Mirror Frames )လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ရောင်း ချလျက်ရှိ ပါသည်။၄င်း ကျွန်းဘောင် ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Augustine’s Antiques ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
Luxury Bedroom 2
15000 ~ 25000 $
Luxury Bedroom2Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
နံရံကပ် အဆင့်မြင့် အလှဆင်မှန်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများနှင့် USA နံပတ် (၁) မွေ့ယာများအား အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်းပစ္စည်းများတွင် ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်း မှီ သစ်သားကို အသုံးပြု ထား၍ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်အိမ်သုံး၊ ဟိုတယ်သုံး၊ ရုံးသုံး နံရံကပ် အလှပြင်မှန် သို့ မှန်ဘောင်များကို Prime Living Company မှ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်း ငါးသောင်း ကျပ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရုံးခန်းသုံး An EXECUTIVE CUBICLE
ရုံးခန်းသုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများကို အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ဖြန့််ဖြူး ရောင်းချခြင်းကြောင့် စိတ်တိုင်းကျ မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။သင့်ရုံးခန်းကို ခေတ်မှီလှပသော ပရိဘောဂများထားရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်လုပ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ခေတ်မှီနည်းပညာများ အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။Reception &amp; Cabinet ကို Series လိုက် ရောင်းချပေးခြင်းကြောင့် သာမန်ထက် ပိုသင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ရုံးခန်းသုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။VITO Office Furniture မှ လူကြီးမင်းတို့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ရုံးခန်းသုံး ပရိဘောဂများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်။ ယခုပြသထားသော Executive Office Desk/ Table Series များမှာ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး နှင့် လှပတင့်တယ်သော ဒီဇိုင်းများကြောင့် Company ၏ အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အထူးသင့်တော်သော Office Series တစ်ခုဖြစ်သည်။
Luxury Bedroom 3
12000 ~ 20000 $
Luxury Bedroom3Bed King size 180x200 CM 1 piece Night stand2pieces Dresser set 1 Set Wardrobe 1 Piece Dimension will inform later Please visit our website at : https://www.furniturevintagethailand.com/ Thanks and Best Regards, Miss Jenny Managing Director, Classic Home Products Ltd.,Part. Phone : +66817914549 Email : [email protected] Website : https://www.furniturevintagethailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/VintageFurnitureThailand/ Line ID : jenny.classical
copyright © 2020 www.baganmart.com. All right reserved.